No. 1823, Thursday, June 7, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 1823, Thursday, June 7, 2018
No. 1823, Thursday, June 7, 2018
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက် (ကြာသပတေး၊ ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈)
အမေရိကန်တွင် ခုတ်ဖြတ်ထားသည့် မြွေဦးခေါင်း ကိုက်ခဲမှုကြောင့် လူတစ်ဦး သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့
ခုတ်ဖြတ်ထားသည့် မြွေဦးခေါင်းက ကိုက်ခဲမှုကြောင့် အမေရိကန်တွင် လူတစ်ဦး သေလုနီးပါးထိ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နှင့် တရားဝင်ကုန်သွယ်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရန် MoU မူကြမ်း ကူမင်းအစိုးရထံ ပေးပ
ဆန်တန်ချိန် တစ်သန်း ရောင်းချရေးအပါအဝင် လယ် ယာထွက်ကုန်များ တရားဝင်တင် ပို့နိုင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) မူကြမ်းကို ကူမင်းအစိုးရ ထံ ပေးပို့ထားကြောင်း စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းက ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်၍ ဥရောပလုပ်ငန်းရှင်များ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဒုသမ္မတ ဖိတ်ခေါ်
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မြန်မာကုမ္ပဏီဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း ပြီးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဥရောပ (EU) လုပ်ငန်းရှင်များကို ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက တိုက်တွန်း သည်။
ရခိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွင် နိုင်ငံတကာမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထည့်သွင်းခြင်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်အရေးကြီးအဆိုတင်
ရခိုင်ပြည်နယ်အ တွက် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရာ တွင် နိုင်ငံတကာမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထည့်သွင်းခြင်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးစိုင်းကျော်မိုးက ယမန်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ အရေးကြီးအဆို တင်သွင်းသည်။
ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကြံပေးအဖြစ် ဦးတိုးအောင်အား ခန့်အပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန် လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အကြံပေးအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ တွင်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဌာနမှူး တာဝန်နှစ်ပေါင်းများစွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးတိုးအောင် အား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယဇာတ်ကားအတွက် သေချာပြင်ဆင်နေတဲ့ ရွှေထူး
ဒုတိယမြောက်ဇာတ် ကားအဖြစ် ‘နှလုံးသားတံခါးကို ၀င်ချည်ထွက်ချည်လုပ်တဲ့ဧည့် သည်’ ဇာတ်ကားတွင် Under-ground ဘ၀ကဖြတ်သန်းခဲ့ရ သည့်အတွေ့အကြုံများကို ပုံဖော် ရိုက်ကူးနေကြောင်း အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်ရွှေထူးက ပြော သည်။
ပွဲတက်ဒီဇိုင်းများနှင့် သင်တန်းကျောင်းကိုသာ ဦးစားပေးဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်နာဖြိုးကို
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပညာနှင့် ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဝတ်စုံ များအပြင်အခြား ဒီဇိုင်းများပါချုပ် တတ်သော်လည်း လက်ရှိတွင် ပွဲတက်ဒီဇိုင်းများနှင့် သင်တန်း ကျောင်းကိုသာ ဦးစားပေးဖြစ် ကြောင်း ဒီဇိုင်နာဖြိုးကိုကပြော သည်။
ဒီကနေ့ ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍမှာ တော့ တောင်ကိုရီးယား ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။ ဇွန်လ ၆ ရက်ကစလို့ tvN ရုပ်သံလိုင်းကနေ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး ည ၉ နာရီ ခွဲမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေတာဖြစ်ပါ တယ်။
မလေးရှား မူးယစ်အမှု၏ အဓိကတရားခံကို မန္တလေး၌ဖမ်းမိပြီး ရန်ကုန်တွင် ချုပ်ရမန်ယူ
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖမ်းမိခဲ့သော ကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု၏ အဓိကတရားခံ မောင်မောင်ကို မန္တလေးတိုင်း ၁၆ မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဇွန်လ ၅ ရက် ညက ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရခိုင်ကိစ္စကြောင့် ဥရောပကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တွန့်ဆုတ်နေဟု ဥရောပသမဂ္ဂစီးပွားရေး သံအမတ်ရှစ်ဦးဆို
ရခိုင်အရေးကိစ္စ ရှုပ်ထွေးနေခြင်းကြောင့် ဥရောပ ကုမ္ပဏီများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် သံသယ များဖြင့် တွန့်ဆုတ်နေကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂခုနစ်နိုင်ငံမှ စီးပွား ရေးသံအမတ်များက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း MIC ဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်ခံရ
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွား ရေးကဏ္ဍအတွက် အရေးကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မ ရှင်(MIC)ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဦး သောင်းထွန်းကို ခန့်အပ်ခိုက် သည်။
ရေဘေးနှင့် မိုးကြိုးကြောင့် တစ်ရက်တည်း လူလေးဦးသေဆုံးကာ စိုက်ခင်းအချို့ ရေ မြုပ်၊ အနော်ရထာမင်းတူးဖော်ခဲ့သော နှစ် ၇၀၀ ခန့်သက်တမ်းရှိရေကန်ကျိုးကျ
မကွေး၊ ပဲခူး၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြို့နယ် အချို့ တွင် သဘာဝဘေးကြောင့် တစ် ရက်တည်းလူ လေးဦးသေဆုံးခဲ့ ပြီး အနော်ရထာမင်းတည် ဆောက်ခဲ့သော နှစ် ခုနစ်ရာကျော် သက်တမ်းရှိသည့် ရေကန်အပါ အ၀င် ရေကာတာအချို့ကျိုးကျ ကာစိုက်ခင်းအချို့ ရေနစ်မြုပ်နေ သည်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အတုပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကို ဖမ်းဆီး
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက် သေခံလက်မှတ်နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် အတုပြုလုပ်ဖြန့်ချိသည့် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက ပူးပေါင်းဖမ်း ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကညန မြင်သာ ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလျန်ကျင့် မန်က ပြောသည်။ မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင် အ တုပြုလုပ်ပေးကြောင်း လူမှုကွန် ရက်တွင် ရေးသားကြေညာနေသူ တစ်ဦးကို အသွင်ယူဖမ်းဆီးရာမှ ဇွန်လ ၂ ရက်တွင် မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင် အတုပြုလုပ်သူ ခြောက်ဦး၊ လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးနှင့် ယာဉ်လိုင်စင်အတုပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိသည်။ ထို့အတူ ဇွန်လ ၂ ရက်၌ပင် ကညနရုံးအနီး ယာဉ်လိုင်စင် အတုပြုလုပ်ပေးသူ တစ်ဦးကို အသွင်ယူဖမ်းဆီးရာ ပူးပေါင်းကြံ စည်သူငါးဦးအနက် လေးဦးကို သက်သေလိုင်စင်ကတ် အတု များနှင့်အတူ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
အလှပြင်ဆိုင်ဗန်းပြကာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်သည်ဆိုသော တရုတ်နိုင်ငံသူများအမှု ပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်
ရန်ကုန်မြို့ တောင်ဥက္က လာပမြို့နယ်တွင် Oriental Spa အမည်ဖြင့် အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်လှစ် ပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသူများအမှု ကို ဇွန်လ ၆ ရက်က မြို့နယ်တရား ရုံးတွင် ပထမအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသူ ၁၇ ဦးကို ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက် ဥပဒေပုဒ်မ ၃(က)(ခ) ဖြင့် တရား စွဲဆိုထားမှုမှ တရားလို တိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်တင့်လွင်ကို စတင်စစ်ဆေးသည်။
စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသသို့ အမြန်ရေယာဉ်စီးသူ ပိုများလာ
မိုးကာလတွင် စစ် တွေမှ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင် တောဒေသသို့ ကားလမ်းအသုံးပြု မှုထက် အမြန်ရေယာဉ်များဖြင့် သွားလာသူပိုများ၍ စီးပွားရေးအဆင်ပြေကြောင်း အမြန်ရေယာဉ်လိုင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။
မကွေးမြို့ပတ်လမ်းဟောင်းဘေး ကျူးကျော်အိမ်များ ဖယ်ရှားရေး ဆိုင်းငံ့ပေးရန် တင်ပြမည်ဟုဆို
မကွေးမြို့ တိုင်း ကညနရုံး၏ ကျောဘက် မြို့ပတ်လမ်း ဟောင်းဘေးတွင် ကျူးကျော်နေ ထိုင်သည့် နေအိမ် ၁၄ လုံးကို ဖယ် ရှားရန် စီစဉ်နေ၍ ၀န်ကြီးချုပ်ထံ အသနားခံစာ တင်ပြမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်သူများက ပြောသည်။
ကျေးရွာ ၅,၀၀၀ ကျော်အတွက် လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဝေရန် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး စာချုပ်များချုပ်ဆို
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၁၀ ဖြင့် ကျေး ရွာ ၅,၀၀၀ ကျော်သို့ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဝေနိုင်ရေး ဆက်စပ်ပစ္စည်း များ ဝယ်ယူရန် ပုဂ္ဂလိကစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် စာချုပ် ၁၉ ခု လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ် ပြန်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးသွားသူများနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့်ကုလအေဂျင်စီနှစ်ခု နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးသွားသူများ မိမိဆန္ဒအ လျောက်ပြန်လာရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး၊ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီနှစ်ခုက ထောက်ပံ့ကူညီမည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့် ခွာသွားသူများအား ပြန်လည် လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အ ထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရေးမြန်မာအ စိုးရနှင့် ကုလအေဂျင်စီများဖြစ် သော ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်(UNDP)၊ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခ သည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ရုံး(UNHCR) တို့အကြားနားလည် မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အ တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနက အ ချက်ရှစ်ချက်ပါဝင်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ထုတ်ပြန်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေး
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့ လာသူများအနေဖြင့် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်လေ့လာလိုပါက ပြည် ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော် မရှင်သို့ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အောင်ဆန်းကွင်း၊ စလင်းကွင်းနှင့်ပဒုမ္မာကွင်းတို့ကို တစ်လကျပ်ငါးသိန်းပင် မပြည့်သည့်နှုန်းဖြင့် ယခင်အစိုးရက ငှားရမ်းပေးခဲ့
ယခင်အစိုးရလက်ထက် ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်သို့ ငှားရမ်းချပေးထား သည့် အောင်ဆန်းကွင်း၊ စလင်း ကွင်းနှင့် ပဒုမ္မာကွင်းတို့ကို ငှား ရမ်းခသည် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်သိန်း ၁၃၀ ခန့်သာရရှိကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း က ပြောကြားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်လလျှင် ကျပ် ငါးသိန်းပင်မပြည့်သည့် နှုန်းဖြင့် နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းပေးခဲ့သည်။
သထုံခရိုင်ရှိ လုပ်ငန်းများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနည်းလမ်းများသုံးရန် ကြပ်မတ်မည်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး ဖြစ်စေမည့် နည်းလမ်းများသုံးရန် ကြပ်မတ်မည်ဟု ခရိုင်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုး ၀င်းက ပြောသည်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့က စာပန်းအိမ်ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်းကိုတည်ထောင်သူ ဒေါက်တာကျော်စော။ သူ့အဖေက တရားရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦး။ ‘‘ကျွန်တော့်ကို ဟင်္သာတမှာ မွေးတာ။ ၁၉၆၀ အောက်တိုဘာ ၃ က။ အဖေက ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ရန်ကုန်၊ စစ်တွေ၊ တွံတေးပြောင်း နေရတာပေါ့’’
ဟွာဝေး၏ P20 နှင့် P20 Pro စမတ်ဖုန်းများ မြန်မာပြည်တွင်စတင်မိတ်ဆက်
ဟွာဝေးက ကျောဘက်ကင်မရာ သုံးလုံးပါဝင်သည့် P20 Pro နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်း ပညာများ အသုံးပြုထားသည့် P20 စမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုဇွန်လ ၃ရက်ကစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင် မိတ်ဆက်ရောင်းချသည်။
MYTEL က ယခုနှစ်အတွင်း ကျောင်းပေါင်း ၅၀ တွင် ဖိုက်ဘာအင်တာနက် အခမဲ့ပေးမည်ဟုဆို
ဇွန်လ ပထမပတ် အတွင်း ရန်ကုန်တွင် စတင်မိတ် ဆက်မည့် MYTEL အော်ပရေတာ သည် ၂၀၁၈ အတွင်း ကျောင်း ၅၀ ကို ဖိုက်ဘာအင်တာနက် အခမဲ့ပေးအပ်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ MYTEL သည် ၁၅နှစ်အတွင်း ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ကန်ဒေါ် လာ ၆၄ သန်း အသုံးပြုမည်ဖြစ် သည်။
မန္တလေးတိုင်းတွင် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနေ၍ ထိန်းညှိရန် ဥရောပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဆို
*/ မန္တလေးတိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်မှုများပြားနေ၍ ဥရောပ နိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်ဝင်ရောက်ထိန်းညှိပေးရန်လိုအပ် နေကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီး ချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။ ဇွန်လ ၆ ရက်က နေပြည် တော် Kempinski ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ - ဥရောပ သမဂ္ဂ စီးပွားရေးဖိုရမ်အပြီးတွင် မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်က သတင်းထောက်များအား ပြော ကြားသည်။
မန္တလေးမြို့ကို ပထမဆုံး ပလတ်စတစ်ကင်းစင်မြို့တော်အဖြစ် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲနေ
မန္တလေးမြို့တော် ကို ပလတ်စတစ်ကင်းစင်ရေးနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် သန့်ရှင်းလှပသော မြို့တော်ဖြစ်ရန် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲနေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။
အရက်ပုန်းဆိုင်များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်း
အသက်(၁၈)နှစ် မပြည့်သည့် လူငယ်များ အရက် သေစာသောက်စားမှုနှုန်း မြင့် မားနေသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တရားမဝင် ရောင်းချနေသည့် အရက်ပုန်းဆိုင်များကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါက်တာမောင်မောင်က လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။ ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် ကျင်းပ သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အ စည်းအဝေး၌ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လိုင် စင်မဲ့အရက်ပုန်းဆိုင်များကို ယစ် မျိုးဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းမေးမြန်း ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မောင်မောင်က အထက်ပါအ တိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အိပ်မပျော်ဖြစ်နေသူများ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီသည့် စားသောက်ပုံအလေ့အထ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာကြုံနိုင်
အိပ်ပျော်ရန် အခက်ကြုံနေသူများသည် ညအချိန်အတွင်း ကျန်းမာ ရေးနှင့်မညီသော အစာစားသောက်ပုံ အလေ့အထများ ရှိလာနိုင်ပြီး ဆီးချိုရောဂါနှင့် အဝလွန်ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ရပ်က ဖော်ပြသည်။ အရီဇိုးနားကျန်းမာရေးသိပ္ပံတက္ကသိုလ်က သုတေသီများ၏ လေ့လာချက်အရ ညပိုင်း အစာစားချင်စိတ် မြင့်မားခြင်းသည် အိပ်ပျော်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့်ဟု သိရသည်။
မန္တလေးရွှေကျောင်းအလုံးစုံပြုပြင်ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၅ သန်းလိုအပ်ပြီး အလှူရှင်များ ဖိတ်ခေါ်
မန္တလေးမြို့ရှိ ရွှေနန်း တော်ကျောင်းကြီး အလုံးစုံပြုပြင် ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၅ သန်းကုန်ကျနိုင်သဖြင့် အမေရိ ကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးရန်ပုံငွေ အပြင် ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင် ရန် ဖိတ်ခေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရွှေ နန်းတော်ကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း ပရောဂျက်ဒါရိုက်တာ ဂျက်ဖရီ အယ်လန်က ပြောသည်။
တောင်ပြုံးပွဲ ဈေးဆိုင်ခန်းများ ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် စတင်ရောင်းချမည်
တောင်ပြုံးပွဲတွင် ဈေး ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလိုသူများအ တွက် ဈေးဆိုင်ခန်းနေရာများကို ယခုလကုန်ပိုင်းတွင် ရောင်းချ မည်ဟု ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်က ပြော သည်။